म २७ बर्षिया महिला हुँ, मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ? - Khabar Samachar
Home / मनोरंजन / म २७ बर्षिया महिला हुँ, मेरो श्रीमानको यौन शक्ति कम छ, के गर्ने होला ?
2 weeks ago	मनोरंजन 125 Views
Previous म ३९ वर्षीया महिला हुँ । मेरा श्रीमान् ६० वर्षको हुनुहुन्छ र म उहाँकी तेस्री श्रीमती हुँ । हाम्रो विवाह भएको १५ वर्ष भयो । मेरी एक छोरी छिन् । अप्ठ्यारो परिस्थितीमा उहाँसँग मेरो विवाह भएको हो ।
Next अनिन्द्रा किन हुन्छ, यसबाट कसरी बच्ने ?